Daa'imni hin dhalanne mirga attamii qabdi? - BBC News Afaan Oromoo
Daa'imni garaa haadhaa keessa jiru Seera Itoophiyaatiin namoota kaan wajjiin mirga walqixa qabaa? Mirgoota isaan qabaniifi hin qabne irratti ogeeyyii seeraa gaafanneerra.
Seeraa fi Heera biyya Itoophiyaarratti mirgi ifatti taa'ee akka hin jirre Mana Murtii Waliigala Oromiyaatti abbaa seeraa kan ta'an obbo Guddataa Qajeelaa ni dubbatu.
Mirga daa'immanii jedhamee kan keeyyata 36 jalatti tarreeffame mirga daa'imman dhalatanii lubbuun lafarra jiranii malee, kan daa'ima garaa haadha keessa jiranii hin ibsuu jedha.
Maaliif jennee gaafannaan qajeelfamaarratti namni mirgasaa gaafachuu kan danda'u guyyaa dhalatee kaasee amma lubbuun du'uutti jechuudhaan seerri Hariiroo hawaasa bara 1960 bahe tumuu akka ragaatti kaase.
Yoo xiqqaate sa'aatii 48 turuu qaba akka lubbuun turuu qabu kaasa.
Daa'imni garaa haadha keessa jiru mirga warraasaa dhaalu qabaa kan jedhuufis deebii qabu.
Warraa dhaaluuf sa'aatii 48 ol lafarra lubbuun turuun dirqama ta'u ibse. Kanaafuu, daa'imni hin dhalanne mirga dhaala argachuu wabii seeraan tumame hin qabatu.
Mirgoonni kunneen ittisa yakkaa, tumaa hariiroo keessatti ibsamu kaase.
Yoomirraa eegalee eegumsi taasifamaaf?
Daa'ima jechuun seerri biyyattiin ganna 18 gadi kanneen jiraan ta'uu akka ibsu kan dubbatu ogeessi seeraa Guddataan, yoomirraa eegalee daa'ima jedhamu akka eegalan daangaa olkaa'ee akka hin qabne dubbatan.
Guyyaa micireen uumamee/uumamtee torban tokkoo booda fi kanneen erga dhalattee booda daa'ima jedhanii falmanillee jiraachuu kaasan.
Konveenshiniin mirga namoomaa Ameerikaa daa'imman sadarkaa micireetti jiraniif eegumsa akka godhuttis eegumsa karaa seeraa qabachuu qabaa jedha.
Seerri biyyatti irraa caala mirgaa haadhaaf akka dursa kennu, amma fayyaa haadha rakkoorra hn buusnetti daa'imnis mirga lubbuun dhalachuu akka qabu kaase.
Ulfaa baasuun dhorkaadha ta'us, seera yakkaa keeyyata 545- 550 tumamu ibse. Tumaa seeraa kana darbuun hidhaa guyyaa 10 amma waggaa 5 gidduu nama adabsiisu jedhe.
Ulfa karaa seera qabeessaan baasuun akka danda'amu seerri biyyatti ni eeyyama. haa ta'u malee haaldureen guutamuu qaban jiru.kan jalqabaa
micireen haala umamaa sirriin yoo hin qabaannee, sababni biraan immoo gudeedamuun haati wayita ulfoofte, alkkasumas, da'uufis qaamaan gaheetti yoo hin taane ulfa baasuun ni eeyyama.
Haati guddisuuf gahumsa kan hin qabaanee rakkoo sammuu ogeeyyin mirkna'ee qabdus ulfa baasuun akka eeyyamamuus itti dabalee himeera.
''Namni ulfa baase gumaa lubbuu baasa''
Ulfa akkaata tumaa seeraan alatti baafamuuf abbaa alangaatu himannaa banee falmuufi jedha.
Abbaan seeraa Guddataan,mana murtiitti dubartoonni gudeedamanii da'aanii guddisuuf akka yeella'aan, humna ittiin guddisan kanneen hin qabne ,carraa deebi'anii heerumuusaanii akka cufuu himatan ulfaa kanneen baasan dubartootni jiraachu dubbatu.
Daa'imman sadarkaa ulfaatti jiran kanneen dhalatan wajjin eegumsa seeraa walqixa hin qabani jedhee akka yaadu ogeessi seeraa Guddataan himeera.
Labsiin idila addunyaa mirgoota daa'immanii ilaallatu Itoophiyaan mallatteessite ''daa'imma garaa haadha keessattis ta'e, dhalatan eegamu akka qaban labsame. dhimmi ulfaa baasuun wal qabatu falmisiisadha.
Sirna Gadaa keessatti mirgoonni micireen garaa haadhaa keessaa jiru qabu maal fa'aa akka ta'e Walitti qabaa abbootii Gadaa Oromiyaa fi abbaa GadaaTuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatoo gaafanneerra.
Sirni gadaa guutummaatti ulfa baasu akka dhorku dubbatani. Daa'imni garaa haadha rakkoo umamuuratti yoo qabatees hin ulfi hin baafamu jedhu.
Daa'imni haadha fi abbaa firooma dhiigaa qabanirraa uumames wayita dhalatu safuu irraa baasanitu jira malee ulfi hin baafamu jedhan.
Namni ulfa baase gumaa lubbuu baasa jedhu. Daa'imni dhalatee yoo lafa gahee malee dhaalli akka hin kennamneef himan. Ammaa dhalate lafa gahutti garuu, kunuunfamuuf mirga qabaachuu fi haatii waan ulfa baasu akka hin fayyadamne seerri gadaa akka eeyyamuuf himan.
Ulfa baasuun amantii fi seera biyyoota gargaraa keessatti dhimmoota wal famisiisaa ta'an keessatti ramadama.
Biyya daa'imman dhalatanirraa ulfa baasuun itti baay'atu
Ulfa baasuun hafuu hin qabu jechuun US'tti hiriira ba'ame: Suuraadhaan